liam, Author at Anycall Mobile — Page3of 16
မကြာခင်ဈေးကွက်ထဲကိုရောက်လာတော့မယ့် realme7Series အကြောင်း
realme အနေနဲ့ အရင် စက်တင်ဘာလလောက်တုန်းက သူတို့ရဲ့ Mid-range series အသစ်ဖြစ်တဲ့ realme7series အသစ်ကို India မှာမိတ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုမှာတော့ ဒီ realme7series ဟာ…
Vivo ရဲ့ V Series ထဲက V20 မှာ ဘယ်လို Features တွေကိုမျှော်လင့်လို့ရမလဲ ??
Vivo အနေနဲ့ အရင်လလောက်တုန်းက သူတို့ရဲ့ V Series ထဲက Vivo V20, Vivo V20 SE, and Vivo V20 Pro တွေကို အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတစ်ချို့မှာမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ အခုမှာတော့ ဒီ…
အကြမ်းဆုံး ၊ အမိုက်ဆုံး ဆိုတဲ့ အရာတွေနဲ့ပွဲထွက်လာပြီဖြစ်တဲ့ iPhone 12 Series
Apple အနေနဲ့ ည ၁၁ ခွဲ အချိန်လောက်က Hi Speed Event 2020 ကိုကျင်းပခဲ့ပြီး စာဖတ်သူအားလုံး ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာစောင့်မျှော်နေတဲ့ iPhone 12 Series ကိုတရား၀င်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ iPhone 12…
OnePlus 8T ရဲ့ အရောင်အသစ် Lunar Silver ပုံ‌ေတွထွက်ပေါ်လာ
OnePlus ကတော့ သူတို့ရဲ့ OnePlus 8T Flagship ဖုန်းအသစ်ကို လာမယ့် အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်နေ့မှာ မိတ်ဆက်လာတော့မှာပါ။ ဒီမိတ်ဆက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာ OnePlus ကိုယ်တိုင်ကပဲ Twitter မှာဖုန်းရဲ့ Aquamarine အရောင်ထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။အခုမှာတော့ နာမည်ကြီး…
မကြာခင်‌ေဈးကွက်ထဲကိုရောက်လာတော့မယ့် OPPO F17 Series အကြောင်း
OPPO အနေနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ April လမှာ သူတို့ရဲ့ F-Series ထဲက ဖုန်းအသစ်လုံးဖြစ်တဲ့ F15 ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ အခုမှာတော့ OPPO ကနေ F17 Series အသစ်ကို ကျွန်တော်တို့မြန်မာကိုမကြာခင်မှာ မိတ်ဆက်လာတော့မယ်လို့ Facebook…
Qualcomm ရဲ့ Gaming ဖုန်းကိုတွေ့လာရတော့မ‌ှာလား?
လက်ရှိ Gaming Phone ဈေးကွက်ထဲမှာ Asus ၊ Black Shark ၊ Iqoo ဖ Nubia စတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ Gaming Phone အသစ်တွေကြောင့် Game Phone ဈေးကွက်ဟာတော်တော်လေး…
နောက်နှစ် iPhones တွေမှာလည်း Notch ကိုဆက်သုံးပေးဦးမယ့် Apple
လအတော်ကြာ သတင်းပေါင်း‌စုံထွက်ပြီးအကြာမှာတော့ Apple ကနေ October 13 ရက်နေ့မှာ Event အသစ်တစ်ခုကိုပြုလုပ်လာတော့တရား၀င်ကြေညာလိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Event မှာ ဘယ်လို Products တွေကို မိတ်ဆက်လာမလဲဆိုတာကို Apple ဘက်က နေ အတည်ပြုထားခြင်းမရှိပေမယ့်…
Launching ပွဲရ​ဲ့စင်မြင့်ထက်မှာ ONEPLUS 8T နဲ့အတူတွေ့ရတော့မယ့် OnePlus Buds Z
OnePlus ကတော့ သူတို့ရဲ့ Flagship ဖုန်းအသစ်ဖြစ်တဲ့ OnePlus 8T Flagship ဖုန်းကို လာမယ့် အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်နေ့ India မှာမိတ်ဆက်လာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်မှာတော့ အောက်တို့ဘာ ၁၅ ရက်နေ့မှသာမိတ်ဆက်လာမှာပါ။ တရုတ်မှာပါမိတ်ဆက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်…
OPPO ကလည်း (Foldable) ခေါက်တော့မယ်တဲ့
အခုလက်ရှိစမတ်ဖုန်းလောကမှာ Samsung, Huawei, Motorola နဲ့ Royole စတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကပဲ Foldable ဖုန်းတွေကို ဈေးကွက်ထဲမှာရောင်းလျှက်ရှိပါတယ်။ တစ်ခြားကုမ္ပဏီ တေ‌ွအဖို့တော့ Foldable ဖုန်းတွေအတွက် မူ‌ပိုင်ခွင့်တင်ထားရုံပဲရှိပါသေးတယ်။ ဈေးကွက်ထဲကို ထုတ်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ ဒီထဲမှာ OPPO…
Apple A14 Bionic Chipset ရဲ့ပထမဆုံး Geekbench Score ထွက်ပေါ်လာ
နာမည်ကြီး Chipset တွေရဲ့ အမှတ်တွေကို စမ်းသပ်‌ေ‌လ့ရှိတဲ့ GEEKBENCH ကတော့ 5nm Process အပေါ်အခြေခံပြီး ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Apple A14 Bionic Chipset ရဲ့အမှတ်တွေကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ GEEKBENCH အရ Apple A14…
realme Buds Air Pro ကိုတွေ့လာရတော့မယ်
realme အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ပထမဆုံး TWS Earphone တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Buds Air ကို 2019 December မှာမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ realme Bud Air ဟာဆိုရင် ဈေးကွက်မှာတော်တော်လေးနေရာယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို…
အခုလက်ရှိအချိန်ဟာ Samsung S21 Series ဒါမှမဟုတ် S30 Series ကိုတွေ့ရဖို့ အချိန်အဝေကြီးလိုနေပေမယ့်လည်း ဖုန်းရဲ့ Specs တွေကတော့ တစ်စနဲ့ တစ်စ ထွက်လာနေပါပြီ။အခုမှာလည်း Samsung Galaxy S21 Series ထဲက Galaxy…
Apple iPhone 13 နဲ့ iPhone SE3တို့ရဲ့ Specs တွေစထွက်လာပြီ
Apple အနေနဲ့ စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့တုန်းက Time Flies Event ကိုကျင်းပခဲ့ပြီး Tablets အသစ်တွေ (iPad Air 4th Generation & iPad 8th Generation) နဲ့…
အနိမ့်ဆုံး 128GB Storage နဲ့ ထွက်လာမယ့် iPhone 12 Pro Models များ
Apple အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ iPhone 12 Series ကို ဘာမယ့် အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်နေ့မှာမိတ်ဆက်လာတော့မ‌ှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း Apple ဘက်ကတော့ ဖုန်းတွေမိတ်ဆက်လာမယ့်ရက်ကို တရား၀င်ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ ထုံးစံအတိုင်း ဖုန်း‌ေတွမထွက်လာသေးခင်မှာ သတင်းတွေကတော့ထပ်ထွက်လာခဲ့ပါပြီ။ အခုထပ်ထွက်လာတဲ့…